Ciidanka dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed oo dagaal kula wareegay deegaan ka tirsan gobolka Bakool – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidanka dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed oo dagaal kula wareegay deegaan ka tirsan gobolka Bakool
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Moora-Gaabeey oo qiyaastii 30km u jirta degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa sheegayaa in ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ay maanta halkaasi dagaal kula wareegeen.
Ciidamadaan huwanta ah ayaa la sheegayaa inay gudaha u galeen deegaanka Moora-Gaabeey islamarkaana ay fariisimo ka sameysteen halkaasi, kadib markii ay deegaankaasi ka saareen dagaalyahanadii Al-shabaab oo hore halkaasi ku sugnaa.
Dhinaca kale, ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo dagaalyahanada Al-shabaab ayaa la sheegayaa inuu dagaal ku dhexmaray deegaanka Garasweyne oo qiyaastii 25km u jirta degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool.
Ma jirto wax qasaare ah oo ka dhashay dagaalka maanta ka dhacay deegaanka Moora-Gaabeey ee gobolka Bakool.
Xaaladda deegaanka Moora-Gaabey ayaa la sheegayaa inay haatan tahay mid degan, inkastoo dadka deegaanka ay ka cabsi qabaan in dagaalyahanada Al-shabaab ay dagaal rogaal celis kusoo qaadaan deegaankaas.
Dhinaca kale, ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lasoo sheegayaa inay haatan gacanta ku haayaan deegaanka Moora-Gaabey ee gobolka Bakool, waxaana weli hakad ku jira isku socodka dadweynaha iyo ganacsiga ee halkaasi ka jiray.